Wasiirkii ciyaaraha dawladda federaalka Saleebaan Colaad Rooble oo ku geeriyooday Sucuudiga. – Radio Daljir
Riyaad, Feb 13 ? Wasiirka ciyaaraha ee dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya Saleebaan Colaad Rooble, ayaa xalay fiidkii ku geeriyooday cisbitaal ku yaalla waddanka boqortooyada Sucuud Carabiya.
Alle ha u naxariistee wasiirku ayaa cisbitaalka uu xalay ku geeriyooday yaallay muddo dhawr toddobaad ah, kaddib markii dhaawac ahaan halkaasi lagu geeyey isagoo dhaawac halis ahi ka soo gaaray qaraxii Hoteelka Shaamow ee magaalada Muqdisho 3 bishii Deccember ee sanadkii la soo dhaafay.
Wasiirka ayaa muddooyinkii ugu danbeeyey si aad ah looga soo dayrinayey xaaladdiisa caafimaad, wuxuuna wax ka qabay dhawr meelood oo dhaawcyo xooggani ka soo gaareen oo uu madaxuna ka mid ahaa.
Waa wasiirka 4-aad ee oo u geeriyooda waxyeelladii qaraxii Hoteelka Shaamow ee magaalada Muqdisho, qaraxaasi oo galaaftay nolosha dad aad u tiro badan oo iskugu jiray, wasiirro, macallimiin, arday, dhakhaatiir caafimaad iyo sidoo kale waaliddiin ka soo qaybgalay xafladdii qalinjabinta ahayd ee weerarka lala beegsaday, iyadoo dad badanna ay dhaawacyo halis ahi soo gaareen.
Dadkii ku dhaaawacmay qaraxaasi qaar ka mid ah oo qabay dhaawacyo halis ah uuna ka mid ahaa wasiirka ciyaaraha ee geeriyooday ayaa loola cararay waddanka Kenya si loola tacaalo xaaladdooda caafimaad, waxaana maalmo kaddib dawladda boqortooyada Sucuudigu ay ku dhaawaaqday deeq caafimaad oo ay dadkaasi u fiday iyagoo si deg deg ah halkaasi loogu wareejiyey muddana lagu dabiibayey.
Dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi ee uu Sucuudigu u fidiyey deeqda caafimaad, ayaa wali badankooda lagula tacaalayaa cisbitaalka Boqor faad ee magaalada Riyaad ee xarunta waddankaasi Sucuudiga, kuwaasi oo dhammaantood hadda la tilmaamaya in ay ka soo darsadeen waxyeellooyinkii soo gaaray.
Wasiirka ciyaaraha ee geeriyooday Saleebaan Colaad Rooble, waxaa uu ahaa 47 jir, waxaana uu siyaasadda ku soo jiray muddo ka badan 15 sano, waxaana uu dawladdaan federaalka ku jiray tan iyo asaaskeedii Inbagaati isagoo ka mid ahaa xildhibaannadii ugu horreeyey ee lagu doortay Kenya.
Xilligii uu kala jabay baarlamaanku waxaa uu ka mid ahaa xildhibaannadii la fakarka ahaa guddoomiyihii baarlamaanka ee xilligaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan, isagoo markii danbana noqday afhayeenkii ururkii dib u xoraynta ee Asmara garabkii Shiikh Shariif, isagoo isku darkii baarlamaanka kaddibna loo magacaabay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha, waxaana muddadii sanadka ahayd ee uu ahaa wasiirka ciyaaraha la tilmaamay in uu muujiyey waxqabad buuran oo xagga isboortiga ah.